Shina: Vady sy Zanaky ny Mafàna Fo Iray Anaovana Antsojay Ety Enaty Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Shina: Vady sy Zanaky ny Mafàna Fo Iray Anaovana Antsojay Ety Enaty Aterineto
Voadika ny 13 Febroary 2012 9:24 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, عربي, Español, English
Mpampiasa Twitter iray tsy nitonona anarana no namoaka ny mombamomba manokana ny vadin'i Wen Yunchao, sy ny zanany lahy tety anaty aterineto. Bilaogera sy mafana fo tsy zoviana amin'ny ady hisian'ny fahafaha-miteny malalaka eny anivon'ny aterinto Sinoa i Wen ary niharan'ny niharan'ny fanenjehana noho izany tato anatin'ny taona vitsy farany. Imbetsaka ny kaonty gmail fampiasany no nisy nijirika ary feno sarinà famonoana olo-malaza aely amin'ny alalan'ny aterineto.
Tamin'ity indray mitoraka ity, ny vadiny sy n y zanany lahy no lasibatry ny fanafihana efa voarindra. Androany i Wen Yunchao dia nampakatra sarin'ny fàfana nataony dika mitovy avy amin'ny kaontiny Twitter. Ilay dikasary dia naneho fa misy olona iray tsy mitonona anarana mampiasa ny Twitter ary nampiasa ny teknolojia “peer to peer” mba hizaràna ireo mombamomba ny tena manokana, ka isan'izany ny laharan'ny karapanondron'ireo ankohonan'i Wen :
Ny dikantenin'ilay hafatra dia hoe :
@chenachao izaho no Wen Yunchao, ampiasain'ny FBI Amerikana mba hametraka ekipa aty anaty aternet, ny mpikambana tsirairay dia hahazo 5.000 dolara amerikana tsirairay avy isam-bolana. -raha tsy mino ahy ianareo, dia azonareo atao ny maka ny vadiko sy ny zanako lahy ho takalon'aina. Ho eo ambanin'ny fanaraha-masonareo mandrakariva aho. Ny laharan'ny findaiko dia: XXXXXXX ny karapanondro dia: XXXXXXXXXXX
@wgwhappy laharan'ny pasipaoro: XXXXXXXXX Visa mankany Hong Kong sy Macau : XXXXXXXXX. Vady: XXX. karapanondron'ny vady: XXXXXXXXXX Zanakalahy: XXX karapanondron'ny zanakalahy: XXXXXXXXXXXX.
Marina daholo ireo laharana rehetra ary tsy misy afa-tsy ny departemantan'ny polisy ao amin'ny Tanbe Sina irery ihany no afaka manana fahafaha-mahita ny antsipirihan-javatra toy izany. Mandritra izany i Wen Yunchao dia monina any Hong Kong miaraka aminà fahazoan-dàlana hiasa.
Timor Atsinanana 2 andro izay
Fahalalahàna miteny 6 andro izay